Eo anelanelan'Andriamanitra sy ny olona
"Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy." - Heb. 7:25.
Tsy nametraka tao amin'i Adama lavo sy tsy mankato ny fitokiana napetrany tao amin'i Adama nahatoky sy marina Andriamanitra. (...) Tsy omena ho an'ny mpandika lalana ny valisoan'ny lanitra. (...)
Tena nisokatra marina tokoa ny mason'i Adama sy i Eva, saingy nisokatra ho amin'inona moa izany? Nisokatra mba hahita ny henatra sy ny fahapotehana teo amin'ny tenan'izy ireo, mba hahatsapa fa tsy teo aminy intsony mba hiaro azy ireo fitafiam-pahazavan'ny lanitra izay natolotra azy ireo. Nisokatra ny mason'izy ireo mba hahita fa ny fitanjahana no vokatry ny fandikan-dalana. Raha nandre ny feon'Andriamanitra tao amin'ny saha Edena izy ireo dia niafina Azy; satria efa novisavisain'izy ireo sahady ny fanamelohana avy amin' Andriamanitra, izay zavatra tsy mbola fantatr'izy ireo raha tsy tamin'ny fahalavoany. (...)
Nambaran'Andriamanitra fa ny hany fiarovana tokana ho an'ny olombelona dia ny fankatoavana feno ny teniny rehetra. Tsy tokony ho latsaka amin'ny fanandramana ny faharatsiana miaraka amin'ny vokatra aterak'izany isika. Hitondra fahalemena amin'ny alalan'ny tsy fankatoavana izany. Nokendrena hanolotra tsilo-tsaina mazava ho an'ny olombelona momba ny asa rehetra hataony ny drafitr'Andriamanitra. (...) .
Tokony ho nisy fiaraha-miasa ety dia ety teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Indrisy anefa fa simba noho ny tsy fankatoavan'i Adama izany drafitra izany. Notarihin'i Satana hanota izy, ka tsy hifandray amin'izy ireo tahaka ny fanaony fony izy ireo tsy mbola nanota intsony Andriamanitra.
Taorian'ny fahalavoana dia Kristy no nanjary Mpampianatra an'i Adama. Izy no niasa teo amin'ny toeran'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona, mba hanavotana azy ireo ho afaka amin'ny fahafatesana teo no ho eo. Noraisiny ho andraikiny manokana ny asa fanelanelanana. Nomena fotoam-pahasoavana manokana indray i Adama sy i Eva mba hiandanian'izy ireo indray amin'Andriamanitra, ary voafaoka ao anatin'izany drafitra izany avokoa ny taranak' izy ireo rehetra. — L 91, 1900
Raha tsy noho ny fanavotana nataon'ny Zanak'Andriamanitra dia tsy ho nisy akory ny fandrotsahana fitahiana na famonjena avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona. Saro-piaro amin'ny voninahitry ny lalàny Andriammtra. Ny fandikany izany lalany izany no niteraka fisarahana mampahatahotra teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Nanana fifandraisana mivantana, maimaim-poana, ary mahasambatra tamin'ny Mpahary azy i Adama fony izy mbola tsy nanan-tsiny. Taorian'ny fandikany ny lalàna kosa dia tamin'ny alalan'i Kristy sy ireo anjely ihany no nifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olombelona. — ST, 30 Janoary 1879